धान दिवसको वाहानामा मोडल रीतिका जिरेलले किन यस्तो हर्कट देखाइन् ? (फोटो फिचर सहित) « Kalakhabar
धान दिवसको वाहानामा मोडल रीतिका जिरेलले किन यस्तो हर्कट देखाइन् ? (फोटो फिचर सहित)
प्रकाशित मिति : सोमबार, १६ असार २०७६ ००:२७
कलाखबर संवाददाता,१५,असार–काठमाण्डौं । आज देशभर धान दिवस मनाएको छ । सो अवसरमा विभिन्न मौका छोपेर नेतादेखि कलाकार सम्मले साच्चिकै किसानको सिको गरेका छन् । पूर्व प्रधान मन्त्रि डा. बाबु राम भट्टराइले आफ्नो जन्म थलो गोरखामा हलो जोतेको र खेतको आली बनाएको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ ।
उक्त तस्बिरले भाबी सन्ततिमा नकारात्मक असर पर्ने र धान दिवसलाई उतेजित तुल्याएको देखिन्छ । रितिकाले धानको बिऊले आफ्नो गोप्य अंग छोपेका थिए । अहिले उक्त तस्बिर सामजिक संझालमा भाइरल भएको छ । तस्बिरहरु तल हेर्नुस